KwiVegas kule Veki kwiWebTrends Yenza | Martech Zone
KwiVegas kule Veki kwiWebTrends Yenza
NgeCawa, ngo-Epreli 5, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Andizukubakho kwinkomfa yonke, kodwa abantu abanobabalo Iindidi zeWebhu kwaye Unxibelelwano lweVoce undimemile ukuba ndiye kwipaneli yokubloga yequmrhu e Ingqungquthela yeWebTrends Engama-2009 kule veki eLas Vegas. Iindidi zeWebhu ngumboneleli ophambili wewebhu kubahlalutyi kunye nezisombululo zorhwebo kubathengi.
Ndikulangazelele ukuchitha ixesha kunye Isicwangcisi seendaba esitsha u-Justin Kistner ukubona ukuba imibutho yethu inokuncedana njani. Inkomfa ine I-ajenda epakishwe, kubandakanya abaphathi beenkcukacha eziphambili zephulo lika-Obama abaza kwabelana ngeemfihlo zokujolisa ngqo kubaphulaphuli, ukuzibandakanya kweendaba ezintsha kunye nokuvavanywa kwedatha.
Kananjalo, inkomfa ibandakanya eyayo uthungelwano lwentlalo lwababekho kunye nezithethi ukugcina unxibelelwano nabanye, into endingayibonanga kwixesha elidlulileyo kunye neenkomfa zentengiso kwi-Intanethi kodwa ngokuqinisekileyo ndongeza ixabiso kwiphakheji. Ewe kunjalo, Bandakanya '09 iakhawunti ye-Twitter ngokunjalo!
Ukuba uza kuba kumnyhadala, okanye naseVegas, qiniseka ukujonga phezulu! Ndijonge phambili ekuthetheni kumsitho kwaye ndidibane nabanye oogxa kumzi mveliso endonwabe kuphela ekuthetheni kwi-Intanethi.
Imidiya yokuncokola kunye noMqeshwa Conundrum
Sithini isicwangciso sakho sokuBuyisa abaThengi?
Epreli 5, 2009 ngo-7: 28 PM
Enkosi ngokukhankanywa malunga nokuzibandakanya. Kuyasivuyisa ukuba nawe. Ukongeza kubakhi bezokwakha idatha ka-Obama sikwanayo UIan Ayres Ukuthetha ngamandla edatha kunye nemodeli yokuqikelela kwintengiso yanamhlanje. Ngokwam, ndiyonwabele incwadi yakhe iSuperCrunchers kwaye ndijonge phambili ekumveni ethetha.